रोनाल्ड बर्नार्ड उलझन र साजिश सिद्धान्त को नियंत्रित विध्वंस: मार्टिन विजल्याण्ड
रोनाल्ड बर्नार्ड अवरोध र साजिश सिद्धान्तहरु को नियंत्रण विध्वंस
मा दायर [AIVD अलार्म], समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	28 अगस्ट 2017 मा	• 16 टिप्पणिहरु
जब इन्टरनेट बस उठ्यो त्यो राम्रो थियो र तपाईले अधिक गतिको लागि पर्खन सक्नुहुन्न र तपाईले थप जानकारी खोज्न र आदान प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। यस बीच, हामी कुनै पनि राम्रो र साना पीडितहरूका लागि थाहा छैन, कुनै सेल फोन शायद जब त्यहाँ एक भयानक पुरानो समयको अवधि थियो कि थियो जब समय मा रहन चाहन्थे। तपाईं पनि फिर्ता भ्याम रेल वा स्टेसनमा फर्कन चाहनुहुन्न। सबै चीज छिटो हुँदैछ र विषयहरूको लागि ध्यान अवधि छोटो र छोटो देखिन्छ। युवाहरू स्नैपच्याट र इन्स्टाग्राम मार्फत कुराकानी गर्छन्। फेसबुक मुख्यतः Facetime भिडियो कलको लागी प्रयोग गरिएको छ र स्नैपचाटमा तपाई आफ्नो साथी कहाँ हुनुहुन्छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ त्यो विकल्प असक्षम गर्न सक्नुहुनेछ, तर यो अवश्य ठुलो छैन। तपाईं यसलाई आफ्नो प्रेमीलाई बदमाउन को लागी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, तपाईं आफ्नो पूर्व संग हुनुहुन्छ भनेर देखाउन। युवाहरू अहिले यस चीजसँग सम्बन्धित छन्। यो तपाईंको साथीहरूको छोटो भिडीयोको बारे सबै कुरा हो, जुन सबै चीजहरू सबै भन्दा बढि हेर्न सकिन्छ। यो पानी भाप जस्तो छ। एक सास मा केहि कुनै समय मा कुनै प्रचार वा गायब हो। एक लेख पढ्दा अब किशोर किशोरीहरूको लागि रोचक छैन। उच्च शिक्षा वाले व्यक्तिहरूले अझै पनि ध्यान दिन सक्षम हुन सक्छन्, तर औसत एकाग्रता र ज्ञान अवशोषणमा बढ्दो अस्थिर देखिन्छ। त्यो सांख्यिकीय अध्ययनहरूको रिपोर्ट छैन, तर केवल लेखकको एक अवलोकन हो जुन तपाइँ सुरक्षित रूपमा सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ पहिलो अनुच्छेद पढ्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, तपाईं पहिल्यै धेरै भन्दा बढी जानु भएको छ। फेसबुक पोष्टहरूमा प्रतिक्रियाहरूबाट मैले देख्न सक्दिन कि मान्छे प्रायः शीर्षक मात्र पढ्नुहोस् र कुनै लेखको वास्तविक सामग्री होइन। हेडलाइन पढेर, मान्छेहरूले उनीहरूको सामग्री सामग्री पहिले नै बुझ्न सक्छन् र प्रायः छोटो प्रतिक्रियामा शीर्षकमा उनीहरूको विचार दिन्छ। सामग्री प्राय: छोडिएको छ, किनकि लेखकले के भन्न सक्दछ कि तपाइँ पहिले नै थाहा छैन? तपाईं मानिसहरूलाई दोष लगाउन सक्नुहुन्न। यो संचारको गतिमा निहित छ कि इन्टरनेट बढेको छ र मानिसहरूको हेरचाह गर्ने जानकारीको मात्रा। तपाइँ सबै केहि पढ्न सक्नुहुन्न र यसैले हेडलाइनहरूमा आधारित द्रुत स्क्यान गर्नुहोस्। एक liners सँग फोटोहरू अक्सर लेख भन्दा राम्रो गर्छन। यही कारणले चहचहाना शायद धेरै लोकप्रिय भएको कारण, किनकि तपाईंले आफ्नो सन्देश 1 वाक्यमा राख्नु पर्छ। त्यसैले यदि म लेख पढ्न ट्रिगर गर्न चाहनुहुन्छ भने, शीर्षक आकर्षक हुनुपर्छ। माथिका शीर्षक सम्भवतः धेरै पढ्नका लागि पनि पढ्न थाल्ने। यदि मैले लेखेको छु 'रोमी र सावनाह मामला मा हार्ड सबूत, जवाहर डीएनए को हत्या को हथियार मा पाया", त्यसपछि यो लेख शायद वायरल चला्यो। त्यसपछि लेख खोलिनेछ र मानिसहरूलाई चाँडै देखाइएको प्रमाणको एक टुक्रा खोज्ने शब्दहरू स्क्यान हुनेछ।
यसैले मानव मनोचिकित्सक अब छिटो जानकारी र द्रुत ब्राउजिङको लागि उपयोगी जानकारीको लागि उत्साहित छ। तपाईं यसको लागि कसैलाई दोष लगाउन सक्नुहुन्न; तपाईं यसको बारे मा निराश हुन सक्नुहुनेछ (सायद पुरानो पीडितहरु संग यो मामला हो), तर त्यो कुनै प्रयोग को छैन। तपाईं घोडा घुमाउन सक्षम नहुन पनि मानिसहरू दोषी गर्न सक्दैनन्, तर सरुवा सडकमा तीव्र गतिमा तीव्र कारहरु संग 200 किलोमिटर / घण्टा सम्म पुग्छ। तपाइँसँग भएको स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहुने छ र तपाईको जीवन शैली यसको साथ बदल्दछ। सबै चीज छिटो हुन्छ, दायरा बढेको छ र ध्यान अवधि कम हुन्छ। यसको अतिरिक्त, हामी फिलिम उद्योग को वृद्धि को कारण र अब अधिक देखि अधिक उद्योग उद्योग को कारण फंतासी - जस्तै दुनिया मा रहन को लागि अधिक देखि अधिक उपयोग गरिन्छ।
किन यो विस्तृत परिचय (तपाईंले पहिले नै आधा बाटो छोड्नु भएको छ)? म बिन्दु बनाउन चाहन्छु। मेरो विचारमा, हाम्रो दिमागको कम ध्यान अवधि कारण मानिसहरूले प्रभाव पार्न सजिलो छ। यो चढ्ने माउन्ट एवरेस्ट जस्तो छ। यदि तपाइँ धेरै छिटो चढ्नुहुन्छ भने, तपाईंको शरीरमा नयाँ अवस्था प्रयोग गर्न समय छैन र यसले तपाईंलाई मार्न सक्छ। यदि तपाईं चीजहरू तिरस्कार गर्न समय नदिनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईं आचरणको लागि जानुहुन्छ जुन सत्यको छविको रूपमा लिन्छ। हामीले हालैका महिनाहरूमा यो एक नयाँ नायक को उद्भव संग देखेको छ जुन सम्पूर्ण माध्यमिक माध्यमबाट आएको छ। उहाँको छद्मनाम रोनाल्ड बर्नार्ड हो। मानिस पूर्ण रूपमा प्रमोदित भएको थियो किनकी उनले केवल दस मिनेटको केहि साक्षात्कारमा एक जीवनको कथालाई बताए। मेरो अन्तिम स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री प्रबन्धक हुनु अघि, मैले कहिलेकाहीं4घण्टाको2वार्तालापहरू थिए। अन्तिम चौथो साक्षात्कार भन्दा अघि मलाई चौथो साक्षात्कार पछि अघिल्लो वार्तालापको संक्षिप्त गर्न र वेतन वार्ता गर्न संक्षेपमा एक व्यापक मनोवैज्ञानिक परीक्षण गुमाउनु पर्छ। तपाईंको CV पनि पूर्ण रूपमा जाँच गरिनेछ। यो कसरी कम्पनीले उनीहरूको संगठनमा फिट छ भन्ने महसुस गर्नु अघि कसरी गर्छ र तिनीहरूले तपाईंको पोर्टफोलियो तपाईलाई सौंपन्छ। यद्यपि, यदि तपाईं रोनाल्ड बर्नार्डको साक्षात्कारमा हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि यो देखिन्छ कि शायद नै कुनै पनि महत्वपूर्ण सवाल छ। मान्छेले कथा बताउँछ। कुनै पनि प्रमाणिकरण योग्य छैन र त्यसपछि उनीहरूको कथाहरूको लागि "नयाँ" कथाको रूपमा आउँछ। विशेष कुरा यो हो कि मान्छे यस व्यक्ति को आफ्नो नयाँ बैंक को शुरुवात मा आफ्नो पैसा संग सौंपा; शुभ बैंक। यसका लागि तिनीहरूले € 100 को प्रमाण पत्र खरीद गर्छन्, जसले बैंकको सुरुवात लागत सहन मद्दत गर्दछ। यो € 100 के हुन्छ भने यो स्टार्टअप असफल भए ठूलो प्रश्न हो।
डी भोक्सकटन्ट रिपोर्ट गरियो यो लेख 26 अगस्त देखि 5000 मान्छे पहिले नै हत्या भएको थियो। सोच्छा गर्ने कि ती सबै 5000 मानिसहरूले एक प्रमाणपत्र खरिद गरेका छन्, जुन पहिले देखि नै आधा मिलियन लगाईयो। र सबै एक कथामा आधारित! म भन्न चाहन्छु कि म पनि यो विशेष रूप देखि चालाक छ र यो रोनाल्ड बर्नार्ड को बारे मा लेख को मेरी श्रृंखला मा (सोझै पढ्नुहोस: लेख 1, लेख2en लेख 3) मैले वर्णन गरे कि यो सम्भवतः एनएलपी प्रविधिको कारण हो जसको साथ भिडियो मिर्च गरिएको छ। यी प्रविधिहरूले किन राम्रो काम गर्छ र एकदमै राम्रो काम गर्दछ किन महत्त्वपूर्ण कारण माथिको व्याख्या विस्तार गरिएको छ। सबै छिटो सञ्चारको कारण, मानिसहरू साँच्चिकै अझै खडा हुन र ब्रेकहरू राख्न सक्षम छन् र भन्छन्: "एक मिनेट पर्खनुहोस्, के यो र यसको बारेमा के हो?यसको अतिरिक्त, हामी फिलिमिंग र ड्रेस कोड को एक निश्चित तरिका मा आदी हो गए जो कि हामी केहि सत्य हो भन्ने विश्वास गर्दछ। एक बाल बाल कट्टर संग एक सूट मा हामीलाई सफल व्यवसायी वा विश्वसनीय समाचारreader को अनौठो रूपमा सम्झाउँछ। हामी धेरै परिश्रम छौं। यदि मैले तपाईंको शर्मिला अनुहारसँग टी-शर्ट र जीन्समा सम्बोधन गरें भने, तपाईंको अवचेतन दिमागले "bon vivant" वा "beach beachboy" लाई सम्बद्ध गर्नेछ।
म सामान्यतया मुख्य स्ट्रीम मिडियामा विनाशकारी सूचना अनमास्क गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दछु। यद्यपि, जब मैले यो थाहा पाएको थिएँ कि यो रोनाल्ड बर्नार्ड हाइपले मेरो पाठकहरूलाई चाँडै पकडिरहेको थियो, मैले यसलाई गम्भीर नजर राख्न थाले। यो चाँडै स्पष्ट भयो कि सम्पूर्ण वैकल्पिक मीडियाले यो प्रयोग गर्यो अस्वीकार्य कथाहरू मानिसको। उनीहरूलाई केही साइटहरूमा "सीस्टेबलब्लूवर" भनिन्छ, तर सेटिबलब्लावरको परिभाषा भनेको "कसैलाई दुर्व्यवहारको सामना गर्ने हो र यो प्रमाणको साथ प्रमाण दिन्छ"। उदाहरणका लागि, कम्पनी वा संगठनमा दुर्व्यवहारको सम्बन्धमा कंक्रीट व्यक्ति र घोडा उल्लेख गरेर यो गर्न सकिन्छ। तथापि, तिनीहरू बालबालिका वा अंगको निकायलाई भारतको जीवित बच्चाहरुबाट लिइने कथाको बारेमा कथा कथाहरू हुन्। त्यो घडीको बारेमा बजिरहेको छैन गलत साबित गर्न साबित, त्यो हो प्रमाण प्रदान नगरी एक कथा बताउनुहोस्.
यो लाग्छ कि एक जना सचेत निर्णयले यस व्यक्ति र कथाहरु लाई वैकल्पिक मिडिया मार्फत सुरू गर्न थाल्यो। सबै पछि, उनले यी कथाहरु बिना आफ्नो शुभ बैंक अवधारणा बेच्न सक्षम थिए। बैंकको अवधारणाको साथ केहि गलत छैन जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ पनि एक बारन र सल्लाहकार बोर्डमा एक सज्जन छ, त्यसैले क्षमता त्यहाँ देखिन्छ। तर रोनाल्ड बर्नार्डले जान्दछ को वैकल्पिक मीडिया भित्र संवेदनशील चोर छुने चीजहरूको नाम दिनुहोस्। यस प्रकारको शुभ बैंकले बढ्दो लक्षित समूहमा ट्याप गरेको देखिन्छ: 'साजिश विचारक'। हैन कि बशर्ती स्प्रिंगबोर्ड र बजारले शुभ बैंकबाट त्यस्तो अवधारणा सुरू गर्ने? तपाईं आफैलाई मात्र सोध्न सक्नुहुन्छ कसरी यो सम्भव छ कि कसैलाई भनिन्छ कि एल्टिस्टिस्ट सर्कलहरूमा अनुयायी बाल बलिदानहरू मानिसहरू पनि एउटै अभिजात वर्गका साथ काम गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, केरोन एंथोनी सी। कोइलोरोले यस विषयको बारेमा कहिल्यै रोनाल्डलाई एक प्रश्न सोध्नुभयो? के श्री अर्नोड छ छ श्री मोरङ रोनाल्ड को परीक्षा को लागी त्यसो भए पनि उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईदिनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराईएको छ।
अमेरिकामा हामीले प्रसिद्ध साजिश विचारक एलेक्क्स जोन्सलाई आफ्नो वेबसाइटमा राखेका छौं inforwars.com। यो एक बलियो कहानीको साथ पनि आयो जसले ठूलो प्रभाव बनायो। अन्डरकोभर फोटोहरू थाहा छैन जसमा एलेक्क्स जोन्स बोहेमियन ग्रोभ लुकेको क्यामेरामा प्रवेश गर्न सफल भए। जोन्स फिलिममा कसरी अनुयायी बालबालिकाको बलिदान भइरहेको थियो भन्ने फिल्ममा सक्षम थिए, विश्वका अगुवाहरूको अत्यधिक राखी दर्शकहरू बीच उभिएका थिए। जोन्स साँच्चै भनिएन कि यो एक गुड़िया वा एक वास्तविक बच्चा थियो, तर कथा वायरल गयो र यो एलेक्स जोन्सलाई एक सच्चा सेतो ब्लाउलेटको स्थिति दिईयो। उहाँले 911 साजिश र धेरै अन्य चीजहरूको बारेमा समाचार पनि ल्याउनुभयो। अन्तमा, एलेक्स जोन्सले एकताका अभिभाराका एजेन्डाहरू सेवा गर्न बाहिर निस्क्यो, जुन तिनले आफ्नो प्रारम्भिक दिनमा प्रदर्शन गर्न लागेका थिए। यो स्पष्ट भयो जब त्यो डोनाल्ड ट्रम्प को चुनाव अभियान को लागि मुखस्पति बनी र वास्तव मा फेरि एक नै अभिजात वर्ग को सेवा गरे। मलाई पनि बोहेमियन ग्रोवको कथामा प्रशिक्षित गरिएको छ। यो यति विश्वसनीय देखिन्छ। तर ईमानदार हुनुहोस्: के तपाई साँच्चै सोच्नुहुन्छ कि तपाईं केवल पत्रकारको रूपमा आउनुहुनेछ? यसको बारे फेरि सोच्नुहोस्! मलाई पनि गर्नु पर्छ। यदि हामी एवरेस्ट मा पुग्न पहिले बेस क्याम्पमा acclimatize समय र नयाँ अक्सिजन सर्तहरूमा प्रयोग गरौं भने, हामी निष्कर्षमा पुग्छौं कि गोपनीय सेवाहरू सक्षम छन्। भावना सत्तारूढ शक्ति को रसोईघर मा एक झलक दिनुहोस। यसैले जोन्स शायद त्यहाँ त्यहाँ अनुमति दिइएको थियो र यही कारण छ कि त्यो साइट मा एक अजनबी को रूप मा गिरफ्तार नहीं गरेको थियो। वा तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि सुरक्षा साँच्चै खराब थियो जब जर्ज बुश र अन्य विश्व नेताहरू जस्तै मानिसहरू त्यहाँ वरपर हिडिरहेका थिए? मैले एक पटक यो पनि विश्वास गरे, किनकि क्यामेरा तस्बिरहरू धेरै विश्वसनीय थिए। और म यो यति बुरा मानन चाहान्छु।
रोनाल्ड बर्नार्डको सन्दर्भमा हामी सम्भवतः त्यहि अवलोकन गर्न सक्छौं, बरु बर्नार्डको अवस्थामा मात्र एक मात्र कथा हो। यदि उनले भर्खरै बालबालिकाको बलिदान अनुष्ठानमा एक रेकर्डर वा लुकेको क्यामेरालाई तस्करी गर्न समस्या ल्याए तापनि, कम्तिमा कम्तीमा अझ अधिक विश्वसनीय हुन्थ्यो। मेरो विचारमा, रोनाल्ड बर्नार्ड जस्तै मान्छे गोप्य सेवाहरूद्वारा सुरू गर्छन्। तिनीहरूको कथा औसत 'साजिश विचारक' को अपील गर्नुपर्छ। तथ्य यह है कि एक मुख्यधारा अखबार जैसे कि डी वोक्सकांकर अब एक लेख को समर्पित कर रहा है उसे हमें अलर्ट करना चाहिए। उदाहरणको लागि, मेरो नाम कुनै पनि अखबार वा मुख्यधारा मिडिया आउटलेटमा कहिल्यै उल्लेख गरिएको छैन। यो गग्लग गर्ने व्यक्तिहरूलाई रोक्न र वास्तवमा एक स्वतन्त्र सच्चा खोजकर्ताको साथ समाप्त हुन्छ र चिन्तित सोचको लागि मतदान गरिनु हो। अधिकतम प्रतीत हुन सक्छ कि वैकल्पिक विकल्प को केवल उन नामहरु जुन गुप्त सेवा को नियंत्रित बल क्षेत्र मा रहयो किनकी उनको स्थापना को उल्लेख गरिन सक्छ। नेदरल्यान्ड्समा हामी यो सेवालाई AIVD (सामान्य खुफिया र सुरक्षा सेवा) भन्छौं। यो पनि उल्लेखनीय छ कि यी साइटहरू (जस्तै किटोटोन, पृथ्वी म्याटरहरू, नियमित समाचारहरू, आदि) कहिल्यै कुनै पनि ठूलो विरोधको सामना गर्दैनन्। मैले विस्तारबाट वर्णन गरें कि यो कसरी मेरो मामला मा शुरुदेखि भयो र अझै पनि हुन्छ यो लेख। तपाईं यस मा फर्क पाउन सक्नुहुन्छ। हालै हप्ताहरूमा हालै हप्तामा छिटो स्पष्ट भएको छ र कसरी सम्पूर्ण वैकल्पिक मिडियाले हामीले सोचेका थिए कि उनीहरु जान्दथे, सत्य खोजीकर्ताहरूको लागि सुरक्षा नेटको रूपमा सुरु बाट स्थापना गरिएको थियो (पढ्नुहोस: 'मान्छे जसको माध्यमबाट प्राप्त गर्न थाले हामीलाई भन्नुहुन्छ - कम्तीमा भन्न - सधैं जहिले पनि विश्वसनीय छ)। यो 'एलेक्स जोन्स प्रभाव', मैले यो कल गरेँ, नेदरल्यान्डमा पनि हुनेछ र रोनाल्ड बर्नार्ड, इर्मे शिलर्स, गोविन्द जोन्सर्स, अर्गन बोस् र अन्य वैकल्पिक नामका अन्य नाम जस्ता नामहरू पनि चाँडै एक वैध अलबाय प्रदान गर्नेछ। भन्न सक्षम हुन: साजिश साइटहरूले नकली समाचार फैल्यो.
यी सेवाहरूले इन्टरनेट भरी धेरै वेबसाइटहरूको ओपेरा जंगलसँग भरिएको छ जसले तपाईंलाई 'लगभग सत्य' ल्याउँछ। फलस्वरूप, मानिसहरूले शाब्दिक रूपमा रूखको लागि जंगललाई देख्न सक्दैनन्। र त्यो वास्तवमा यस 'सत्य समुदाय' को उद्देश्य भएको जस्तो देखिन्छ। हामी कि 'सच्चा समुदाय' को नियंत्रित संरचना को एक त्रासदी मा शामिल छ, जो तब पूर्ण रूप देखि नियंत्रित विध्वंस को माध्यम ले छ, ताकि मान्छे 'विश्वसनीय मुख्यधारा मीडिया' मा फिर्ता आउँछ। हामी पनि नियन्त्रण वैकल्पिक मीडियामा एक पाना देख्न सक्छौं, उदाहरणका लागि एलेक्स जोन्स 'इन्भोर्सहरू सीएनएन र फक्स समाचारको स्थान बढ्न सक्छन् (र तुलनामा नेदरल्यान्डमा एउटै प्रक्रिया अनुभव गर्दछ), तर यदि दुवै पक्ष तपाईं अझै भ्रामक भइरहेको छ।
निस्सन्देह त्यहाँ यो रोनाल्ड बर्नार्डले चाँडै आफ्नो सडक पट्टि प्रयास गर्ने र रोनाल्ड बर्नार्डबाट टाढाको प्रयास गर्नेछु भनेर मेरो लेख पछि नीदरल्याण्डको वैकल्पिक मिडियामा मानिसहरु वा वेबसाइटहरू हुनेछ। हामीले पनि केही वर्ष अघि मैले मीका काटालाई उजागर गरे। तर तपाई सधैँ देख्नुहुन्छ कि 'वैकल्पिक मिडिया कसाई' कहिल्यै आफ्नै शरीरमा आलोचनात्मक देख्दैनन् र तपाईं आलोचनात्मक समर्थन मार्टिन व्रिजल्याण्डको समर्थन कहिल्यै देख्न सक्नुहुन्न। त्यो पर्खालमा एउटा स्पष्ट संकेत हो। वेबसाइटहरू जुन गोपनीय रूपमा GISS को रूपमा सञ्चालन गर्दै छन् उनीहरूले आफ्नो साँचो प्रकृति कहिल्यै देखाउँदैनन्। उनीहरूले ती कडा निर्णय गर्नेछन्। त्यसैले यो तपाईंसँग छ, पाठकलाई वास्तवमा खेल खेल्दै जागिर गर्न। के तपाई साँच्चै सोच्नुभएको थियो कि सेवाहरूले ठूलो समूह जागृत वा सम्भावित जागरण अप्रत्याशित छोड्ने छ? त्यस सन्दर्भमा, म व्लादिमीर लेनिनको दोहोर्याएर दोहोरिन्छु: "विरोध नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका यसलाई आफैं व्यवस्थापन गर्न हो"। यदि तपाइँ एक पसलदार छान्नुभयो र उहाँलाई सोध्नुहुन्छ भने उसले आफ्नो गल्ती स्वीकार्न चाहानुहुन्छ, उहाँले "म निर्दोष हुँ" भन्नेछु। यदि तपाईं गोप्य मिडियामा प्रश्न राख्नुहुन्छ कि उनी गुप्त सेवाको लागि काम गर्छन् वा दुई भूमिका खेल्दछन्, तिनीहरू सधैं तपाईँका सबै अवरोधहरू टाँस्न सक्दछन् कि तपाई निश्चित रूपमा यो कुरा होइन। यो नयाँ चर्चमा अलविदा भन्न को लागी तपाईंको भाग मा केवल एक सानो साहस लाग्छ जसको पादरी तपाईले यति राम्रो र भरोसा जान्नुभएको छ। तपाईं पनि व्यक्तिमा उनीहरूको भेट हुन सक्नुहुनेछ र तिनीहरू त्यस्ता राम्रा र विश्वसनीय व्यक्ति जस्तो देखिन्छन। के यो एक शुद्ध नेटको उद्देश्य होइन? नेताहरू भरपर्दो भरपर्दो र विश्वसनीय रूपमा भर पर्दछ। मैले जवान युवतीलाई चर्चमा अलविदा भनेँ र अब वैकल्पिक मिडिया चर्च र तिनीहरूका अगाडि पुरुष र महिलाहरूलाई अलविदा भन्न चाहन्छु।
रोनाल्ड बर्नार्ड, इर्मे Schiffers, विज्ञापन ब्रोयर, को Coperperie Vrije मीडिया: सच्चा चाहने को लागि AIVD सुरक्षा जाल?
रोनाल्ड बर्नार्डले वैकल्पिक मिडियाको माध्यमबाट एक राम्रो अभिनेतालाई स्वीकारे
क्या AIVD नेदरल्याण्ड्स मा पूर्वी जर्मन (डीडीआर) स्टेसी को रणनीति को परिष्कृत गर्यो?
के यो अवस्थित छ वा 'यौन अनुष्ठान बाल दुर्व्यवहार र बाल बलिदान' छैन?
रोनाल्ड बर्नार्ड भिडियो भाग3फेरि एनएलपी प्रविधिहरु बाट पूर्ण
ट्याग: वैकल्पिक मिडिया, बारन एंथोनी सी। Coleiro, विशेष, Guido Jonkers, इरमा Schiffers, अर्नोड छ, रोनाल्ड बर्नार्ड, सच्चा समुदाय
28 अगस्ट 2017 मा 12: 09
के तपाईंलाई सम्झन्छ कि लगभग हरेक प्रसारणकर्ता पाउन्डेड (पोलेनबर्ग इश्माल इलगन गेट) नीलो आँखामा विश्वास गरे र जब सम्पूर्ण डच मीडियाले Poelenburg Powned सर्कसलाई विश्वास गर्यो, तपाईंलाई सम्झन्छ कि यो एक ठूलो झूटो आधारमा आधारित थियो।
कुनै 1 प्रसारणकर्ताले पुनर्स्थापना गरेको छैन। पस्ट गरिएको पोलेनबर्ग कथा वास्तविक अनुसन्धान पछि प्रदर्शन गरिएको थियो। (वहाँ एक treitervlogger कभी नहीं गएको छ, त्यो एक / अभिनेता हो)
र अब रोनाल्ड बर्नार्ड क्रिब्बी जसले (नकली) वैकल्पिक मिडियाले सुनको ढालमा पहेंलो बनाउँछ र मान्छेले उसको नीलो आंख, कथाहरू र एसिड-डल्लो अनुहारहरूमा केवल कथाहरू र थप कथाहरूसँग विश्वास गर्छन्।
यो मात्र होइन कि सबैलाई मनपर्छ, यो वास्तव मा मार्टिन भन्छन् एक preconceived योजना हो।
हिरो व्रिजल्याण्डले चेतावनीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, जुन कसैलाई भन्दा तल रहेको छ कि कथित रूपमा यो पाईएको छ ... र निश्चित रूपले अनुवादको लागि महिनाको लागि लेखिएको थियो, कुन खराबी
28 अगस्ट 2017 मा 12: 32
पावरएनडको जस्तै यो पनि अनमास्क गर्ने एक 1 वैकल्पिक मिडिया साइट द्वारा समर्थित थिएन। फेरि तिनीहरू चिहानको रूपमा चुप लागे। यो Pegida / एन्टिफा प्रदर्शन के अनमास्किंग पर भी लागू होता है, जहां भी सिद्ध दिशा था।
छोटो छ ... तिनीहरू ती क्षणहरूमा मौन चुप लागेका हुन्छन् जब उनीहरूले आफ्नो मुख खोल्छन्। यसैले तिनीहरू वास्तवमा फेरि अयोग्य छन्।
28 अगस्ट 2017 मा 16: 02
भिडियो हेर्नुहोस् YouTube मा माथि माथि राखिएको क्यामेरा (youtube आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्)
त्यसपछि पहिलो प्रतिक्रियामा एक नजर छ।
पहिलो प्रतिक्रिया तल 63 जवाफहरू छन्।
ती जवाफहरूमा यो खुशीको बारेमा होइन B तर मुख्यतया यीशु ख्रीष्टियन, शैतानको बारेमा।
यो सम्भवतः किनभने नक्कली क्रिश्चियन टुप्बुबरले मुख्यतया भ्रष्टाचार गरेका छन् जसले "अनुयायी" ईसाईहरूलाई अनुयायीको रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ, तर यहाँ रोनाल्डो बर्नार्डको धार्मिक पृष्ठभूमि फल हो।
Verhip यो काम गर्दछ, "जाग्ने सच्चा चाहनेहरू" मध्ये कुनै पनि ईसाई वा जागिर हुन नबिर्सन। तिनीहरूले रोनाल्ड बर्नार्डको सम्पूर्ण डिक कथालाई मीठो केकको निगल गरे, किनभने यो "के तिनीहरूले पहिले नै थाह थियो" हो!
28 अगस्ट 2017 मा 16: 06
बिरामी भएका बच्चाहरु। तिनीहरू पनीर मन पराउँछन्।
29 अगस्ट 2017 मा 06: 37
22: 25 "के तपाईँ रोक्न चाहनुहुन्छ?"
अवश्य कुनै टोपी छैन! म लगभग आँसुहरू उत्पादन गर्ने प्रबन्ध गर्दछु।
28 अगस्ट 2017 मा 15: 15
Pfff थोडा लामो टुक्रा
28 अगस्ट 2017 मा 15: 16
बस मजाक गर्दै।
धेरै राम्रो लेख मार्टिन।
28 अगस्ट 2017 मा 17: 03
राम्रो लेख अन्यथा भन्न सक्दैन।
28 अगस्ट 2017 मा 17: 43
म मस्तिष्क, राम्रो लेखमा सहमत छु।
यदि मैले यो गर्न सक्छु भने मैले यो लेखेको छु, तर म सक्दिन।
यसैले मलाई खुशी छ कि तपाईं मार्न सक्नुहुन्छ र यति मार्टिन गर्दछ!
त्यसैले मार्टिनको धन्यवाद, तपाईंले मेरो टाउकोमा एक स्पष्ट संरचनामा शब्दहरू लेख्नुहुन्छ।
28 अगस्ट 2017 मा 20: 25
धेरै राम्रो लेख फेरि। श्रीमान बर्नार्डलाई बुझाउनको लागि धन्यवाद। यो पनि हिसाब छ कि उनले आफ्नो भिडियो मा बताउन को लागी भयानक चीजहरु को बारे मा एक उल्लेखनीय मुस्कुराहट को तरिका मा अनुभव गरेको छ। यदि यो सही थियो वा यदि उनीसँग कुनै भावना थियो भने, तिनले यस्तो ठूलो मुस्कानसँग बताउन सकेन। मलाई लाग्छ कि यो असम्भव छ। त्यो मुस्कान उनको अनुहार मा फंसिएको छ, त्यहि नकली। उहाँ पहिले नै हँसिनु हुन्छ कति मानिसहरू यहाँ बागवानी हुनेछ र धेरै हजारौं यूरोहरु संग उनको समर्थन गर्नेछन्। हँसिलो मान्छे!
29 अगस्ट 2017 मा 04: 48
ठीक छ, हामी फेरि बस्छौं। हाम्रो कानको पछि लाग्दछ। तर हामी हामिहरूलाई बाँकी छौं जुन उच्च शक्तिद्वारा नियन्त्रण गरिन्छ।
यो हजारौं वर्षको लागि भइरहेको छ, हामी केहि बुझ्न सक्छौं तर धेरै छैन।
आफ्नो हृदय पछ्याउनुहोस्। यो तपाईंको टाउको भन्दा बढी बुद्धिमानी हो।
यद्यपि। राम्रो लेख। Thanxzz
29 अगस्ट 2017 मा 08: 43
कुनै उच्च शक्ति छैन, तर फरक बिजुली।
र प्रेरित छैन, तर प्रभावित।
कुनै पनि र कसैलाई हाम्रो एसईएलएफभन्दा उच्च छैन।
29 अगस्ट 2017 मा 06: 07
सुपर लेख मार्टिन! आशाले धेरै पढ्न पाउनेछ!
29 अगस्ट 2017 मा 07: 16
अधिकांश 'साजिश' सामान्यतया यस्तो बैंकमा सामेल हुन सक्नेछैन। तिनीहरू अक्सर प्रायः ऋणमा हुन्छन्, यो लक्षित समूह जस्तो लाग्दैन जुन पैसा बनाउन उद्देश्य छ र असल मान्छेसँग पनि सम्बद्ध छैन। मेसेन्सनको व्याख्यानमा भाग लिने र भ्यान स्टेनसेनका सभाहरूमा उपस्थित भएका व्यक्तिहरू जसले यस्तो एटिटिस्ट क्लबको सदस्य बन्नेछ। यो अक्सर प्रायः मानिसहरु जसले चिन्ताजनक सोचलाई त्यागेका हुन्छन् जब यो एक 'एल्टिस्टिस्ट' परिचित प्रकार र बर्नार्ड जस्तै अभिनेता द्वारा ल्याइएको कथामा आउँछ।
29 अगस्ट 2017 मा 08: 45
राम्रो लेख मार्टिन। रोनाल्ड नकली छ। रोनाल्ड एक विक्रेता हो।
6 सेप्टेम्बर 2017 मा 15: 09
म रोनाल्ड बी ब्लेज को समयरेखा तस्वीर मा एक खुराक बनाउन को विरोध नहीं गरेर सके। उनको शानदार कथाहरु यति नै महत्त्वपूर्ण अस्तित्वको हानिकारक छ कि मैले अझै पनि 1x लाई ध्यान दिईरहेको छु। यो मुख्यतः किनकि सम्पूर्ण वैकल्पिक मिडियाले यी अनुचित योग्य कथाहरूको पछाडि शेर्पा गर्दैछ र त्यहाँ 'सच्चाई सेवा' को परिचय दिनको लागि चाँडो एकदम सही हुनेछ।
« रोनाल्ड बर्नार्ड भिडियो भाग3फेरि एनएलपी प्रविधिहरु बाट पूर्ण
के यो अवस्थित छ वा 'यौन अनुष्ठान बाल दुर्व्यवहार र बाल बलिदान' छैन? »
कुल भ्रमण: 2.470.944
ClairVoyance op तपाईका वरपर यति धेरै व्यक्तिहरू अन्धा किन छन्?
सनशाइन op परिवर्तनको शक्ति डर, प्रोग्रामिंग र गलत भ्रम को बहावबाट शुरू हुन्छ र एक साँचो क्रान्तिमा बदलिन्छ
SandinG op के ट्रम्पको कडा रेखा चीनतिर डलरको गिरावट र अर्थव्यवस्थाको पतनको शुरुआत हो?
SalmonInClick op आईफोनले भर्खरको आई-ओएस १.19..13.5 अपडेटमा कोविड १-अनुप्रयोग लुकाउँछ